Fampidirana ny fahalalana fototra momba ny Surfactants amin'ny sehatry ny solika
Araka ny fomba fanasokajiana ny akora simika ao amin'ny solika, ny surfactants amin'ny solika dia azo zaraina amin'ny alàlan'ny fampiharana ho surfactants ho an'ny fitrandrahana, surfactants amin'ny fitrandrahana, surfactants ho an'ny fanatsarana ny vokatra, surfactants amin'ny fanangonana solika sy gazy, ary surfactants ho an'ny fitsaboana rano, sns.
Surfactant amin'ny fandavahana
Ny habetsaky ny surfactants ho an'ny fitrandrahana (ao anatin'izany ireo mpandraharaha fitsaboana ny tsiranoka ary ny fametahana simenitra ny lavadrano) no lehibe indrindra, mitentina eo amin'ny 60% amin'ireo surfactants rehetra ampiasaina amin'ny tanimboly. Ny habetsaky ny surfactants amin'ny fanarenana solika dia kely, saingy ny atiny teknika avo kokoa. Ny habetsany dia mitentina 1/3 amin'ny totalin'ny surfactants ampiasaina amin'ny tanimbary. Ireo karazana simika roa ireo dia mitana toerana lehibe amin'ny surfactants amin'ny sehatry ny solika.
Amin'izao fotoana izao, ny fikarohana momba ny mpandraharaha fitsaboana ny tsiranoka fandavahana izao tontolo izao dia namorona ny toe-javatra “andry telo” any Etazonia, Russia ary China. Etazonia dia mandray fitaovana polymer vaovao isan-karazany ho tanjon'ny fikarohana. Miorina amin'ny foto-kevitra indrindra i Rosia fa "ny akora mora sy mora azo", ary ny fako indostrialy isan-karazany. Ny fikarohana sinoa dia mifantoka amin'ny fampiasana feno ny akora nentim-paharazana sy ny fampandrosoana ny polymèntetika vaovao (ao anatin'izany ny monomer).
Ny fifantohana amin'ny fikarohana ireo mpitsabo mpitsabo ranon-drongony vahiny dia misongadina kokoa, izany hoe, vokatra isan-karazany mifototra amin'ny polymer synthetic misy vondrona asidra sulfonic, izay koa ny làlan'ny fampandrosoana amin'ny ho avy.
Hatramin'ny taona 1990, dia lasa solontenan'ny mpandraharaha fitsaboana vaovao ny fantsom-panafody polymer 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic (AMPS). Ny fandrosoan'ny mpamaky dia namboarina tamin'ny karazan'ireo «rediment viscosity», ireo «reducers» ary ireo menaka fanalefahana. Indrindra tato anatin'ireo taona faramparany, ny surfactants alikaola polimerika misy vokany rahona dia nampalazaina ary nampiharina tamin'ny sehatry ny solika an-toerana sy ny rafi-pitetezana fitrandrahana alikaola polymerika.
Ho fanampin'izany, ny methyl gluconate sy ny glycerin miorina amin'ny drilling dia nahitana vokatra tsara tamin'ny fampiharana an-tsaha, naneho ny fahatsinjaran-javatra tsara sy fampiroboroboana ny surfactants ho an'ny tsiranoka fandavahana. Amin'izao fotoana izao dia nitombo ho sokajy 18, karazana an'arivony ny mpamatsy fitsaboana ny tsiranoka fandavahana ao Shina, miaraka amin'ny fihinanana 300 000 taonina isan-taona.
Tamin'ny taona 1980 dia nivoatra haingana ny fifangaroan'ny simenitra tamin'ny solika tamin'ny taona 1980, ary niforona tsikelikely ny vokatra maromaro. Amin'ny fampiroboroboana ny vokatra vaovao, ny akora polymer synthetic amin'ny ankapobeny no napetraka amin'ny fikarohana; tamin'ny taona 1993, ny simenitra fantsakana solika rehetra ao Shina dia navadika ho andiany manaraka ny fenitra API. Ny vokatra sy ny admixtures dia nivoatra haingana. Ny orinasa dia nahomby tamin'ny famolavolana SAF manokana (solfonated acetone formaldehyde polycondensate), izay mifandraika akaiky amin'ny kalitaon'ny simenitra sy ny fiarovana ny paompy. Coagulants, retarders ary adhesive reinforcing agents dia naneho ny firoboroboan'ny fivelarana tsara koa, ary namorona fifangaroan'ny simenitra fantsakana manokana. Amin'izao fotoana izao dia lasa 200 mahery isan-karazany ny sokajy 11, miaraka amina fatra taonina an'arivony taonina isan-taona.
Surfactant ho an'ny fanarenana menaka
Somary vitsy ihany ny karazana sy ny habetsaky ny surfactants amin'ny fanarenana solika raha ampitahaina amin'ny surfactants ho an'ny fitrandrahana, indrindra ho an'ny vokatra asidra sy famotehana. Anisan'ireo surfactants amin'ny famotehana, ny mpikaroka gelling dia nanaovana fikarohana mba hanovana ny siligaoma voajanahary sy ny cellulose, ary koa ireo polymèntetika samihafa toy ny polyacrylamide.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny firenena vahiny dia nivoatra miadana amin'ny sehatry ny surfactants misy asidra. Ny ifantohan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana dia ny fampiroboroboana ny tsentsina harafesina ho an'ny asidra. Izy io dia miavaka amin'ny alàlan'ny fampiasana akora efa misy hanovana na mpanakan-tsoroka. Ny akora sy ny vokatra dia tsy misy poizina na misy poizina ambany, ary ny vokatra dia misy solubility solika / rano na fanaparitahana rano.
Amines, amonium quaternary ary ny alikaola acetylenic dia manana mpanakan-tsiranoka betsaka, ary ny mpanakana ny harafesina aldehyde dia somary somary lenta noho ny poizina misy azy ireo. Ny mpanakan-tsiranana koa dia fitambaran'ny asidra dodecylbenzenesulfonic sy amine molekiola ambany (ethylamine, propylamine, amine voalohany C8-18, diethanolamide asidra oliva), ary emulsifiers dia emulsifiers misy menaka ao anaty menaka.
Amin'ny ankapobeny, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny fikarohana momba ireo mpitsikilo mavitrika ambonimbony kokoa amin'ny famotehana ireo ranon-asidra ao Shina dia tsy ampy, ary kely ny fandrosoana azo. Ankoatry ny tsindrona harafesina amin'ny famotehana ny tsiranoka asidra mandritra ny fivoarana, dia misy karazany maro hafa, izay amine ny ankamaroany.Kilonga amine, faharoa amine, tertiary amines, amide quaternary na ny fitambaran'izy ireo), ny imidazoline sy ny avy aminy dia kilasin'ny mpanakan-tsolika organika izay ampiasaina amin'ny habe lehibe kokoa.
Surfactants amin'ny fanangonana solika sy gazy
Ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny fampiasana surfactants ho an'ny fanangonana solika sy gazy ary fitaterana any Shina dia natomboka tamin'ny taona 1960, ary misy karazany 14 sy vokatra an-jatony izao. Anisan'ireny, ny mpanala menaka solika no lehibe indrindra, ary manodidina ny 20.000 taonina ny tinady isan-taona. Sina dia namorona vokatra demulsifier mety amin'ny sehatry ny solika, karazany maro no tonga amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny taona 1990; raha mandrotsaka teboka depressants, improvers mikoriana, reducers viscosity ary anti-wax agents dia vitsy, ary ny ankamaroan'izy ireo dia ho an'ny vokatra sarotra, ny menaka crude hafa dia manana fepetra sy fahasamihafana samihafa amin'ny fampandrosoana ny vokatra vaovao noho ny fepetra takiana amin'ny surfactants ampiasaina amin'ny famoizam-po , fanatsarana ny fikorianana, fampihenana ny viscosity ary tanjona fanesorana ny savoka.
Surfactant amin'ny fitsaboana rano any an-tsaha
. Ny mpitsabo rano amin'ny sehatry ny solika dia karazan-tsimika manan-danja amin'ny famolavolana solika. Ny fatra isan-taona ataon'ireo mpiasan'ny rano isan-karazany dia mihoatra ny 60.000 taonina, ka ny 40% no surfactant, na dia surfactants amin'ny fikarakarana rano ao an-tanimbary aza dia lehibe tokoa ny fangatahana, saingy vitsy ny fikarohana momba ny surfactants momba ny fitsaboana rano any Shina. Ny karazana surfactants amin'ny fitsaboana rano amin'ny tanimbary dia tsy feno, ary ny ankamaroan'ny vokatra dia ampidirina avy amin'ny indostrian'ny fitsaboana rano amin'ny indostria, fa noho ny rano misy ny solika. Ny fahasarotan'ny vokatra nampidirina mivantana avy amin'ny fitsaboana rano indostrialy dia tsy dia mihatra, indraindray tsy mandaitra, ary tsy misy surfactant fitsaboana rano any an-tsaha. Ny fikarohana vahiny momba ny surfactants amin'ny fikarakarana rano dia mavitrika indrindra amin'ny fampandrosoana flocculants, ary misy vokatra marobe novolavolaina, saingy tsy dia maro ny fitsaboana maloto ho an'ny sahan-tsolika sy solika.
Surfactant ho an'ny fanarenana menaka tertiary
Milamina ny kalitaon'ny vokatra surfactant amin'ny fanarenana solika any ivelany any ivelany ary lehibe ny haben'ny famokarana. Amin'izao fotoana izao, karazana surfactants sy polymère amin'ny famindrana solika no noforonina tany Shina, saingy tsy afaka mamaly ny filan'ny fanarenana menaka tertiary izy ireo. Ny famokarana alkylbenzenes mavesatra isan-taona ho an'ny surfactants izay ampiasaina amin'ny solika mifindra solika synthetic dia latsaky ny 20 000 taonina, izay sarotra ny mamaly ny filàna, ary ny lanjan'ny molekiola sy ny fizarana ny lanjan'ny molekiola dia tsy mety amin'ny surfactants izay ampiasain'ny mpandrindra solika synthetic.
Na dia betsaka aza ny asa vita amin'ny surfactant, dia mbola tsy mahafeno ny filan'ny tondra-drano ao amin'ny solika io, ary misy ny olana amin'ny haben'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra. Daqing, Shengli, Liaohe, Dagang ary ny sahan-tsolika hafa dia efa nanatanteraka tondra-drano polymer, Daqing Oilfield dia nanangana orinasa polyacrylamide niaraka tamin'ny vokatra 57.000 taonina isan-taona, ary i Shengli Oilfield dia nanangana orinasa polyacrylamide miaraka amin'ny vokatra isan-taona mihoatra ny 20 000 taonina.
Ny orinasam-pamokarana sasany dia manana famokarana mihoatra ny 100 000 t / taona. Ny fangatahana polymer amin'ny famindrana solika isan-taona dia an'arivony taonina. Ny mizana dia afaka mamaly ny filàna, fa ny kalitaon'ny vokatra (toy ny mason'ny molekiola) Mbola misy elanelana misy eo aminy sy ny fahaleovan-tena, ny fanoherana ny maripana ary ny saturation masira. Anisan'ireo solontena miasa mavitrika amin'ny sehatry ny solika, surfactants fanarenana solika tertiary no akora simika be fanantenana.